सीआइवीको ‘अप्रेशन इगल’: यसरी पक्राउ परे विदेशमा नेपाली युवती बिक्री गर्ने गिरोह - Nepal News - Latest News from Nepal
सीआइवीको ‘अप्रेशन इगल’: यसरी पक्राउ परे विदेशमा नेपाली युवती बिक्री गर्ने गिरोह
By nepalnews	 On Jun 1, 2015
काठमाडौ, जेठ १८ – आकार्षक तलबसहित विदेशमा राम्रो रोजगारी लगाई दिन्छु भन्दै अफ्रिकी मुलुक तान्जानिया, केन्या, युगान्डा, खाडी मुलुक यूएइ बहराईन, ओमान तथा मलेशियालगायतको देशमा नेपाली युवती बेचविखन गर्ने १० जनाको एक गिरोह पक्राउ परेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले ‘अप्रेशन इगल’ नै सञ्चालन गरी यो गिरोहलाई पक्राउन गर्न सफल भएको हो । विभिन्न प्रलोभन देखाई विदेशमा नेपाली युवतीहरुलाई बेच्ने कार्य नेपालबाट भइरहेको र यसको ठूलै सञ्जाल रहेको थाह पाएर सीआइवीले चार महिना अघि शुरु गरेको अप्रशनमा हालसम्म १० जना समातिएका छन् त्यसमा एकजना भारतीय रहेका छन् ।
सीआइवीका प्रहरी उपरिक्षक किरण बज्राचार्यका अनुसार अहिले पनि थुप्रै जना यस्ता काममा लागेका छन् । र, उनीहरुलाई खोज्नका लागि अप्रेशन जारी नै रहनेछ । समातिएकाहरु नेपाली भएपनि आधिकाँश विदेशमै बस्छन् । उनीहरु उतै डान्सबारलगायतका कारोवारहरु शुरु गरेका छन् । नेपालमा उनीहरुका एजेन्ट हुन्छन् र त्यसैमार्फत उतातिर पठाउने गरेको र उनीहरु कहिलेकाही नेपाल आउने जाने गरेको गरेको बज्राचार्यले बताए ।
तान्जानिया, केन्या, युगान्डालगायतको देशमा रहेका डान्सबारहरूमा आकर्षक तलब सुबिधा सहितको रोजगारीमा लगाई दिन्छु भनि नेपाली युवतीहरूलाई सो देशहरुमा पुर्याई मानसिक तथा शारिरीक यातना दिई, जबरजस्ती अनैतिक कृयाकलापमा लगाउने गरेको सुचना सीआइवीले संकलन गरी ‘अप्रेशशन इगल’ शुरु गरेका थिए ।
यसरी पक्राउ परे उनीहरु
अप्रेशन शुरुकै अवस्थामा चैत २८ गते सात जना व्यक्तिहरूलाई काठमाण्डौ तथा ललितपुरका विभिन्न स्थानहरूबाट पक्राउ गरेका थिए । पक्राउ पर्नेमा ललितपुरमा माउन्टेन टुरर्स एण्ड ट्राभल्स सञ्चालन गर्दै आएका इमाडेल निवासी राजेन्द्र सुवेदी जावखेलबाट पक्राउ परेका हुन् । मैतिदेवी बस्ने कस्मेटीकको व्यपार गर्दै आएका सविधान राजा मानन्धर जो विदेशबाट डिमाण्ड मगाउने र यहाँबाट युवती स्पलाई गर्ने काममा संलग्न थिए । उनी मैतिदवीबाट पक्राउ परेका हुन् ।
त्यस्तै भारत नयाँ दिल्लीका तरुण रोजना खनगवाल जो ललितपुरको इमाडोलबाट पक्राउ परेका हुन् । तान्जानियामा डान्सबार खोलेर बसेका उनी नेपाल आएर युवतीहरुलाई त्यहाँ लगेर बेच्ने गरेको पाइएको छ । ठूलो भर्याङ्ग बस्ने राजसिह सुलवाल सानो भर्याङबाट पक्राउ परेका हुन् । सविन राजा मानन्धरसँग युवती बेच्ने काममा पर्टनसीप रहेका उनी काठमाडौमा कम्प्यूटरका व्यपार गर्दै आएका थिए । मोरगं निवासी सुनिल अधिकारी हाल ललितपुरको एकान्तकुनामा बस्दै आएका थिए उनी मानभवनबाट चैत २८ गते पक्राउ परेका हुन् । राजेन्द्र सुवेदीले सञ्चालन गर्दै आएको माउन्टेन टुर्स एण्ड ट्राफल्समा मार्केटिगंको काम गर्ने उनी त्यसैको माध्यबाट युवती छनौट गरी विभिन्न प्रलोभन देखाई विदेशी एजेण्टमार्फत विदेश पठाउने गरेको खुलेको छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको गेटमा होटल सञ्चाल गर्दै आएका केदारबहादुर खड्का जो युवती पठाउनका लागि उनले एयरपोर्टमा सहजकर्ताको काम गर्दै आएका थिए । उनी आफ्नै होटलबाट पक्राउ परेका हुन् । मैतीदेवी बस्ने नविन दहाल वसन्तपुरबाट पक्राउ परेका हुन् । उनी भारत दिल्लीका रोजना खनगवालसँग मिलेर नेपाली युवती बेच्ने कार्यमा संलग्न थिए । उनी यसअघि पनि युवती बेचविखनमा पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली युवतीलाई सिरिया पठाई उनीहरुलाई बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न राजेन्द्र खड्कालाई बैशाख ७ गते भोजपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनले दुवईलगायत खाडी मुलुक लगि त्यहाँबाट सिरियालाई बेच्ने गरेका थिए । उनीहरुलाई हाल पुर्पक्षको लागी थुनामा राखिएको छ । र, उनीसँग भारत, केन्या, तान्जानिया लगायतका देशहरूमा रहेका अन्य व्यक्तिहरुलाई अप्रेशनमार्फत समात्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
जेठ १४ गते ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमरासँग समन्वय गरी सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई बारको गढीमाईबाट पक्राउ गरेको छ । उनी त्यसै इलाकाका युवतीहरुलाइ ललाई फकाई भारतीय तथा नेपालीहरुसँग मिलेर विदेशमा बेच्ने गरेको कार्यमा संलग्न गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । त्यस्तै सोही दिन ठमेलबाट पक्राउ परेका सुनिल मगर नेपालका डान्सबारमा गई त्यहाँ काम गर्ने युवतीहरुलाई ललाई फकाई, शुरुमै एडभान्स दिएर मानव तस्करसम्म पुर्याउने काममा संलग्न रहेको देखाईएको छ । उनीहरुलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुन्धानका लागि थुनामा राखेको छ ।
श्रीमतीको नाममा पठाएको रकममाथि अनुसन्धान
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुले विदेशबाट श्रीमतीलगायत विभिन्न आफन्तको नाममा लाखौ रकम पठाएको देखिन्छ । तर, प्रहरी अनुसन्धानबाट सो रकमहरु हात पार्न सम्भव नभएका कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुन्धानमा पनि उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नका लागि सीआइवीले पत्र पठाएको छ ।
सीआइवीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुको श्रीमतीको नाममा तान्जानिया, केन्यालगायतका विभिन्न मुलुकहरूबाट राजेन्द्र सुबेदी खत्रीको नाममा ३६,५६,७१७।– रुपियाँ, उनको श्रीमती सानु गुरूङको नाममा ७,२०,००० रुपियाँ आएको देखिन्छ । त्यस्तै सविन राजा मानन्धरको नाममा ४४,४६,७३१।– रुपियाँ तथा उनको श्रीमती पुजा बखुन्छेको नाममा ७२,८१,८८९।– रुपियाँ आएको अनुन्धानबाट देखिन्छ । भारतीय नागरिक तरूण रोजान खनगवालको श्रीमती हिरा सापकोटाको नाममा १९,८४,५६६।– रुपियाँ, ललितराज सिंह सुवालको नाममा ३२,२०,६१६।– रुपियाँ तथा उनको श्रीमती रिता सिंह सुवालको नाममा १२,८३,३३३ रुपियाँ, सुनिल अधिकारीको नाममा ७१,५४,८७०।– रुपियाँ तथा उनको श्रीमती रोजिना भुजेलको नाममा १७,००,२६३।– रुपियाँ, केदार बहादुर खड्काको नाममा ८,३२,८७२ र नविन दाहालको नाममा २३,७८,२२६।– आएको अनुन्धानबाट खुलेको सीवाईले जनाएको छ ।
उनीहरुको साथबाट बरामद
मैतिदेवीको कालोपुलबाट पक्राउ परेका सबिन राजा मानन्धरको घरबाट ८ लाख ५४ हजार ५ सय नगद रुपिया पनि बरामद गरेको छ । दुवई, केन्या, तान्जानिया लगायतका देशहरूबाट बिभिन्न रेमिटेन्स मार्फत पठाएको ७० लाख ५० हजारको रिसिभ्सड बील पनि बरामद भएको सीआइवीले जनाएको छ । राजेन्द्र सुवेदी खत्रीको साथबाट ८० हजार र अमेरिकी डलर पनि बरामद भएको छ भने सुनिल अधिकारीको साथबाट ९९ हजार र अमेरिकी डलरहरु बरामद भएको छ । साथै बिभिन्न नाम गरेका युवतीहरूको २४ थान राहदानी र १२ थान नागरिकता बरामद गरिएको छ भने युवतीहरूलाई मोडल बनाई खिचिएका विभिन्न ६३ थान फोटो पनि बरादम गरएको सीआइवीले जनाएको छ ।
कति बेचिए त ?
यी १० जनाले यी विभिन्न देशमा लगेर कति युवती बेचे उनीहरुसँग कुनै तथ्यांक छैन । प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुलाई सोध्दा आफूहरुले बेचेको त हो तर कति बेचे थाहा छैन भनि जवाफ दिन्छन् । पक्राउ पर्नेहरुसँग यकिन तथ्यांक छैन तर प्रहरी त्यसमो अनुसन्धानमा लागेको बताइन्छ ।
प्रहरी उपनिरिक्षक बज्राचार्यले भने, तान्जिनियामा मात्र दुई सय नेपाली युवतीहरु डान्सबारलगायतका क्षेत्रबाट फेला परेका छन् । अब अरु देशमा यस्ता कति होला कति । तान्जेनियाँमा फेला परेका युवतीहरु यिनै गिरोह मार्फत गएका हुन् । कोही राजेन्द्र मार्फत, कोही नविन मार्फत, कोही सुनिल मार्फत, कोही तरुणमार्फत त कोही केदारमार्फत गएको अनुन्धानबाट देखिएको छ ।’
मलेशियामा त झन अहिले मजुराको लहर चलेको छ । त्यहाँ नेपाली युवतीको डिमाण्ड आएकै आए छ । त्यहाँ कति बेचिए होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ती युवतीहरुलाई यहाँबाट लग्दा कसैलाई कुचीकार, कसैलाई घरमा काम गर्ने त कसैलाई के त कसैलाई के भनि भिसा लगाएका हुन्छ र त्यही भिसाबाट गएका हुन्छन् । खासगरि ती युवतीहरु डान्सबारमा नै काम गर्नका लागि गएका हुन्छन् । दुई तीन महिना कमाउने टन्नै पैसा हुन्छ । एकछिन त नाच्ने हो भन्दै दलालहरुले फकाएका हुन्छन् । सोझा युवतीहरु डान्सबारमा काम गर्ने भन्दै गएका हुन्छन् तर त्यहाँ देहव्यपारमा लगाएका हुन्छन् । त्यहाँ कोठी सञ्चालन गर्नेहरुको हातबाट बेचेका हुन्छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा पछिल्लो तीन वर्षकै उच्च गर्मी :तापक्रम ३३.५ डिग्री सेल्सियस मापन
ज्वाइँ-जेठानको गोदामबाट ५ सय थान त्रिपाल बरामद